Atombohy ny fivoriana Soul amin'ny Sugarlove1 App
Ho an'ireo mankahala ny fitsipiky ny "Sugardating nentim-paharazana", fa tena mila fifandraisana fifandraisana amin'ny fanahy Sugarlove®.
Izao dia navotsakanao izahay "Soritr'aretina tsy mahasalama" fa:
Mamandrika anao taloha
Manadino anao ny misafotofoto, rovitra, tsy matoky ary malemy
Misakana anao tsy handroso mankany amin'ireo fifandraisana mety mahasalama amin'ny ankehitriny
Ajanony ny fivonosana, ary mitenena ny namanao
Moa ve ianao miady amin'ny fantsom-pifandraisana misy eo amin'ny fiainanao? Na dia indraindray ny tombony ambony indrindra ho an'ny fanahy tsirairay dia voakasik'izany, dia mety hiafara amin'ny fijanonan'ny Fivoaran'ny fanahy.
Sugarlove® dia momba ny fitiavana ny fanahy hafa mivantana ary amin'ny fo feno. Izy io dia fiaraha-miasa ara-panahy. Mety ho sarotra izany, satria toa mora kokoa ny mijanona ho tompon'andraikitra amin'ny tsirairay, manantona izay maha-mahazo aina sy mifehy anao satria matahotra ny hamerina ny sainao ianao.
Miaraka amin'ny eritreritra mavesatra sy fahatsapana vaovao, vonona ianao hanomboka ny fiarahana manomboka izao.